पुश विज्ञापनहरू: रूपान्तरणहरूको प्रतिलिपि गर्नुहोस्
पुश सूचना विज्ञापन डिजिटल विज्ञापनमा सब भन्दा चर्चित विज्ञापन ढाँचा हो। तिनीहरूले तपाइँलाई CPC आधार मा संलग्न दर्शकहरु ल्याउछ, उच्च रूपान्तरण दर को अग्रणी। पुश विज्ञापनहरू, तथापि, फ्रोग्याएड्समा उपलब्ध अन्य विज्ञापन ढाँचाहरू भन्दा अलि बढी रचनात्मक कार्यको आवश्यक पर्दछ। आज हामी तपाईंलाई कसरी पुश विज्ञापनहरूको प्रतिलिपि बनाउने भनेर देखाउनेछौं जसले तपाईंको आरओआई बढाउनेछ
ब्रेकडाउन पुश गर्नुहोस्
एक पुश विज्ञापन, चाहे यो मोबाइल उपकरणहरूमा वा डेस्कटपहरूमा प्रदर्शित हुन्छ, तीन मुख्य, अनुकूलनयोग्य तत्वहरू समावेश गर्दछ: छवि, शीर्षक, र वर्णन / सन्देश।
छवि पुश गर्नुहोस्
जब तपाइँको विज्ञापन को लागी एक दृष्टान्त लिनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि यो स्पष्ट, सफा, आकर्षक र तपाइँको प्रस्ताव संग प्रासंगिक छ।
पुश विज्ञापनहरूको लागि आवश्यक छवि आकार १ 192 २। २ x px हो, त्यसैले यो स्पष्ट धेरै सानो छ। यसैले यो छनौट गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ (वा यदि तपाईंसँग केही फोटोशप कला छ भने डिजाइन) केही साधारण। त्यहाँ अधिक वस्तुहरू छन्, अधिक जटिल - र यसकारण अपठनीय - छवि हुन्छ।
अवश्य पनि, तपाईंको प्राथमिक लक्ष्य प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्नु हो। यो छविसँग गर्न सकिन्छ जुन प्रस्तावसँग सान्दर्भिक छ र प्रयोगकर्ताको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
शीर्षक पुश गर्नुहोस्
पुश शीर्षक तपाइँको केहि शब्दहरु मा प्रस्ताव परिचय को मौका हो। यो छोटो र संक्षिप्त हुनुपर्दछ, जस्तो कि तपाईंको निपटानमा केवल characters० अक्षरहरू छन्.
शीर्षक प्राप्त गर्नु भनेको एक छविको साथ, प्राप्तकर्ताको ध्यान खिच्नको लागि महत्वपूर्ण हो। यसको फन्ट आकार वर्णनको भन्दा बोल्ड हुन्छ, त्यसैले यसले तपाईंलाई प्रयोगकर्तालाई जित्नमा उत्तम शट दिन्छ।
तपाइँको शीर्षकहरूमा इमोजी प्रयोग गर्न नलुकाउनुहोस्। सानो प्रदर्शनमा तिनीहरू तपाइँको पोइन्ट सुशोभित गर्ने एक सरल र प्रभावकारी तरीका हुन्। पुश शीर्षक पनि एक CTA को रूप मा सेवा गर्न सक्छ, तर यो यहाँ केहि सरल तरीकाले यहाँ तपाइँको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न ठीक छ।
यो शीर्षक मुनिको रेखा हो। यो केवल characters 75 वर्ण मात्र हो त्यसोभए तपाईले बुद्धिले यो योजना गर्नु पर्छ।
यसलाई तपाइँको प्रापकलाई पिच गर्ने अवसरको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्। प्रस्ताव वा लाभ वर्णन गर्नुहोस् र तपाईंको CTA यहाँ राख्नुहोस्। इमोजिसले फेरि तपाईको प्रभावकारिता बढाउनेछ, यद्यपि हामी अधिक विज्ञापन २ अधिक विज्ञापन २ को प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं, यद्यपि यो अव्यवस्था नहोस्।
कसरी एक राम्रो पुश विज्ञापन प्रतिलिपि लेख्न
पुश शीर्षक र वर्णनलाई प्रभावकारी हुनको लागि केहि रचनात्मकता चाहिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आफ्नो भित्री वाल्ट व्हाइटम्यानलाई च्यानल बनाउनु पर्छ र यसको सबै कलात्मक हुनु पर्छ। ट्रिक तपाईंको पुश विज्ञापन प्रतिलिपि बनाउने क्रममा छ कि यसले संकुचित चरित्र सीमा फिट गर्दछ र प्रयोगकर्तालाई तपाईंको विज्ञापन खोल्न मनाउँछ।
तपाईंको लागि चीजहरू सजिलो बनाउनको लागि, हामीले हाम्रो प्लेटफर्ममा केही उत्तम रूपान्तरण ठाडोको लागि केहि पुश विज्ञापन उदाहरणहरू कम्पाइल गरेका छौं।
सुरु गरौं, यद्यपि, एक "शक्ति शब्द" चीट शिटको साथ। यहाँ शब्दहरूको सूची छ जुन सामान्यतया जोडतोडको भाव निर्माणको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ, मान पुर्‍याउँछ, बहिष्कार प्रस्ताव र उत्तेजक भावनाहरू प्रदान गर्दछ:
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, त्यहाँ केहि ईमोजीहरू छन् जुन तपाईंको रूपान्तरण दर बढाउँछन्।
तपाईं हाम्रो पावर वर्ड चार्टमा फेरि माथिको ईमोजिसमा जान सक्नुहुनेछ जब तपाईंको पुश विज्ञापनहरूको नक्कल सिर्जना गर्दा र उनीहरूले तपाईंको विज्ञापन परिणामहरू कती सुधार गर्दछन्।
अब, सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन भर्कोको लागि केहि पुश विज्ञापन उदाहरणहरू हेरौं।
मोबाइल डाउनलोड: उपयोगिता र खेलहरू
युटिलिटी अनुप्रयोगबाट सुरु गरौं। कल्पना गर्नुहोस् तपाईं ब्याट्री अनुकूलित अनुप्रयोग प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले पूर्ण चार्ज भएको ब्याट्रीको दृष्टान्त प्रयोग गर्‍यौं, सिधा-देखि-पोइन्ट शीर्षक (ब्याट्री इमोजीको साथ), र स्पष्ट रूपमा एप डाउनलोड गर्ने फाइदा भनेको छ (तपाईंको ब्याट्रीमा extra ० अतिरिक्त मिनेट), साथै एक अनिवार्य CTA।
एक मोबाइल खेल प्रस्ताव को मामला मा (यो खेल मोबाइल हीरोज3कल गरौं) हामी शीर्षक मा CTA राखेका छ र एक विवरण लेख्न ध्यान केन्द्रित गरेको छ कि प्राप्तकर्ता लाई खेल डाउनलोड गर्न प्रोत्साहित गर्छ। गेमरहरू के चाहन्छन्? चुनौती! त्यसैले हामीले उनीहरूलाई एउटा दियौं।
क्यासिनो र खेल बेटिंग
यहाँ हामीले एउटा साईन-अप-केन्द्रित प्रस्ताव लिएका छौं जसले एक बोनसको साथ प्रयोगकर्तालाई पुरस्कृत गर्दछ र तपाईं, विज्ञापनदाता, भुक्तानीको साथ। बोनस सम्भावित साइन अपका लागि प्रमुख कारण हो, त्यसैले हामीले यसलाई शीर्षकमा (इमोजी ध्यान दिनुहोस्) पदोन्नति गर्‍यौं, र विवरणमा विवरणहरू वर्णन गर्‍यौं।
खेल शर्त पनि यस्तै प्रकारले काम गर्दछ। नोट गर्नुहोस्, जे होस्, हामी कसरी "सीमित प्रस्ताव" को साथ जोडतोडिको भावना निर्माण गर्दछौं।
BINARY र CRYPTO
बाइनरी प्रस्तावहरूको साथ, तपाईं जोखिमलाई कम पार्दै कैश गर्ने अवसरमा तपाईंको सन्देशलाई बेस गर्न चाहनुहुन्छ। सकारात्मक पूर्वानुमान र अन्य अन्तर्दृष्टिले FOMO सिर्जना गर्न सक्दछ (हराएको डर) र प्राप्तकर्तालाई विश्वस्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ कि अब लगानी गर्नु स्मार्ट व्यवसायको निर्णय हो।
क्रिप्टो प्रस्तावहरू बाइनरी भन्दा धेरै भिन्न हुँदैन जब यो पुश प्रतिलिपि सिर्जना गर्ने आउँदछ। तपाईं सम्भावित लाभहरूमा जोड दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो उदाहरणमा, हामीले एउटा तथ्या used्क प्रयोग गर्‍यौं जुन प्राप्तकर्तालाई दिइएको क्रिप्टोकरन्सीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। खैर, अनौंठो संख्या बढी विश्वस्त हुन जान्छ। हामीलाई किन नसोध्नुहोस्। जे हो त्येहि हो
ई-वाणिज्य र यात्रा
ई-वाणिज्य मा, यो प्राय: प्रस्तावको बारेमा सबै हुन्छन्, तर तपाइँ मोहित छवि लागू गरेर र फाइदालाई जोड दिई अधिक रूपान्तरण प्राप्त गर्ने संभावनाहरू सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई प्राप्त गर्न सक्ने सबै फायरपावर आवश्यक छ, त्यसैले केही "शक्ति शब्दहरू" र इमोजीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
समान यात्रा मा लागू हुन्छ। यहाँ सम्म, हामीले "बिक्री", "अनन्य प्रस्ताव" र स्यान्डग्लास इमोजी जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गरेर जोडतोडको भावना जगाउने निर्णय गर्यौं।
डेटि AND र डेटि OF नगर्नुहोस्
पुश विज्ञापनको साथ डेटिकल ठाडो संयुक्तले हाम्रा ग्राहकहरूलाई केहि उत्कृष्ट परिणामहरू ल्याइरहेको छ। याद गर्नुहोस्, तथापि, कि पुश विज्ञापनहरू गैर-वयस्क ट्राफिक मात्र हुन्, जसको मतलब तपाईंले केही नियमहरू मार्फत खेल्नु पर्छ। नग्नता छैन, कुनै अश्लील सामग्री छैन, र तपाइँको भाषा पनि हेर्नुहोस्।
यहाँ एक उदाहरण छ जुन हाम्रो अनुपालन टोलीले खुशीसाथ स्वीकृति गर्दछ:
र यहाँ एक अभियान को एक उदाहरण छ कि पुश विज्ञापन को माध्यम बाट डेटिकल ठाडो पदोन्नति को लागी हाम्रो नियमहरु पूरा गर्दैन:
यो अहिलेको लागि हो। के अनुमति छ र पुश विज्ञापनमा के छैन के हेर्न कृपया हाम्रो दिशानिर्देशहरू सन्दर्भ गर्नुहोस्। अब तपाईको समय पुश विज्ञापनको प्रतिलिपिको साथ आउने समय हो जुन रूपान्तरण हुन्छ!